प्रचण्डले मलाई निकाल्नु भाडामा बस्नेले घरबेटीलाई निकाल्नु जस्तै हो: ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रचण्डले पार्टीमा कारवाही गर्नु भनेको निकै हाँस्यास्पद भएको बताएका छन । बुधबार साँझ एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डभन्दा अगाडिदेखि नै आफू राजनीतिमा लागेको भन्दै अहिले उनले कारवाही गर्न नमिल्ने बताएका छन । ‘प्रचण्डले पार्टीमा मलाई कारवाही गर्नु भनेको निकै हाँस्यास्पद
भएन र ?, यो त घर भाडामा गएर बस्नेले घरबेटीलाई निकालेको जस्तै हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई कसले कहाँबाट निकाल्छ भन्ने कुराको कुनै मतलब नभएको दाबी गरेका छन । उनले आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गरेको त्याग र तपस्याले यो हैसियतमा पुगेको बताए। ओलीले प्रचण्डले आफूलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने
निर्णय चार्ली च्याप्लिनको जोक जस्तो भएको जिकिर गरे। बैंक्वेटमा भेला गरेर आफूलाई निकाल्दैमा जनताको मनबाट निकाल्न नसक्ने ओलीको भनाइ थियो । ‘तपाईंलाई हाँसो लाग्दैन ? प्रचण्डले मलाई यो पार्टीको सदस्यबाट निस्काशन गर्ने ? चार्ली च्याप्लिनको जोक भन्दा माथिल्लो हैसियतको लाग्दैन । प्रचण्डभन्दा कम्तिमा एक दशक अगाडि राजनीतिमा लागेका हुँ ।
एकदशक अगाडि पार्टी सदस्यता लिएको होला’, ओलीले भने । ओलीले नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आचरणमाथिसमेत टिप्पणी गरेका छन् । अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले प्रचण्डले मान्छेलाई गलत बाटोमा हिँड्न बाध्य बनाउने गरेको आरोपसमेत लगाए । उनले प्रचण्डको यो पहिलेदेखिकै स्वभाव भएको भनेका छन । ओलीले अहिले नेकपामा आएको
विवादमा आफ्नो माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतसँग कुनै गुनासो नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिलेको विभाजन पनि नेपाल खनालसँग नभएर प्रचण्डसँग भएको बताएका हुन । ओलीले भने, ‘विभाजन भएको प्रचण्डजी र मेरो हो । पेरिसडाँडामा मेरो हकदाबी छैन । बल्खु र पेरिसडाँडाको दाबीमा उहाँले राजनीतिक संस्कार सिक्नुपर्छ ।
मैले प्रचण्डजीसँग विभाजन गरेको हो । नेपाल, झलनाथ वा नारायणकाजीसँग विभाजन गरेको हैन ।’ यसअघि नेकपामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको नेकपाले राजधानीमा एक भेला गरेर केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट निस्कासित गरिसकेको छ । ओलीले बैठकमा नआएपछि र विभिन्न समयमा दिएका अभिव्यक्ति गलत देखिएपछि आफूले प्रवक्ता फेरेको खुलासा गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई फेर्न बाध्य भएको बताएका छन् । यसअघि सोमबार बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको बैठकले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै प्रदीप ज्ञवालीलाई नयाँ प्रवक्ता तोकेको थियो । ओलीले प्रचण्ड बैठकमा नआउनुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नयाँ नक्सा छापेपछि आफूमाथि घेराबन्दी गरिएको बताएका छन । उनले भारतले मिचेको नेपालको भूमी समेटेर आफूले नक्सा छापेपछि आफूमाथि प्रहार भएको बताएका हुन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पनि यो कदमपछि आफूलाई समस्यामा पारेको बताउँदै उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पनि चीनसँग नजिक भएपछि घेराबन्दी गरिएको स्मरण गरे । सेतो पाटी बाट साभार